Shaktirisar 30.07.2021 30.07.2021
MAALIIF KRISTAANUMMAA QOFTI AMANTAA SIRRII TA’E?
BirmaduuAdmin Jireenya Jiraachuu fi jireenya dhimma baasu jirachuun waa lama. Gatii fi hiikaa kana egaa dhimma baasaa jireenyichaa jenna. Jireenyi keenya jireenya irra darbee dhimma baasuu qaba.
Dhimma hawaasa keenyaaf, dhimmaa maatii keenyaaf, akkasumas dhimmaa namoota naannoo keenya jiran maraaf. Namni dhuunfaatti ofii isaati jireenya dhimma baasu hin jiraanne, isa biraaf darbee wanta dhimma baasu hin qabu. Gadi gatamee miilla namaatiin didhiitama malee waa tokkollee hin fayyadu. Amanaan soogidda biyya lafaati. Waaqayyo araara isaan nuu keessa hafuura isaan jiraachuu waan fedheef, ijaa hafuura keenyaa waan nuuf baneef jireenyi keenya soogiddumaa kana horate. Biyya lafaa kana kan hadheessuu sadarkaa duraatti jibbiinsaa fi hammina nama cubbamaati.
Jibbiinsi, hammini, hinaaffaan garaa garaa fi albaadhummaan yoomi iyyu warra jireenya keenya adheessanii dha. Kanaa achii eenyuufuu dhimma hin baasu. Miyeesuuf isa miyeessuu male sanatti dabalamuu yookan makamuu qaba. Jireenya maatii keenyaa, jireenya hawaasa keenyaa, akkasumas dhimma biyya keenyaa qarqara dhaabannee hawwa duwwaan yookaan hiixannaadhaan geddaruu hin dandeenyu.
Akkuma gooftaan keenya jireenyaa namootaa sadrakaa garaagaraa, of qusii tokko malee itti makamnee fayyinaa fidee fi gaariitti geddare, nus duuka buutoti isaa jireenya maatii keenyaa, obboloota keenyaa, hawaasa keenyaa darbees biyya keenyaa itti makamuun fedha Waaqayyoo namoota hundaaf mullisuu nu irraa eegama.
Kana gochuu duwwan kan jireenyaa keenyaa akkasumas kan biraa miyeessuu fi tortoruu oolchinu. Jireenya Miyaan Dubbii Waaqayootti qabamuu irraati Egaa jireenya miyaa kana jiraachuuf hundumaa dura amanaan kamuu, isa miyaan jirenyaa keessaa burqu Waaqayyotti qabamuu qaba. Soogiddummaa kan qabu ifa namootaati Yeroo jireenya miyaa kana jiraannu egaa nuti soogidda biyya lafaa duwwaa otuu hin taane, ifa biyya lafaati. Gubachuu malee ifuun hin jiru. Isa kanan egaa kan Kiristiyaana tokkoo jireenya ifaa dhabbataa horatu.
Jiraachuun kee maatii kee keessatti, hawaasa kee keessatti garaa garummaa uuma qaba lata? Obbolessa koo , obboleettii koo gooftaan Yesuus jireenyaa miyaa jiraachutti nuu waame. Egaa akka kanatti kan jireenya miyaa kan jiraannu. Jireenyaa miyaa kan jirachuun keenyas Waaqayyo akka ulfaatuu fi maqaan isaan gaarummaa hundumaa akka dubbatamuufi. Gemechu Olana, barrefame.
Si oui, ce site est pour toi. Menu et widgets Afaan Oromoo Beelofteettaa? Beeluu fooniinii miti, garuu jireenya keessatti waanta caalaaf beeluu qabdaa?
Waanti keessa keetii kan ati quuftu hin fakkaanne gadi fageenya qabu jiraa? Bita sitti galee? Akkuma namni tokko ibisaa dhaamsee ati immoo bakka deebisanii qabsiisamu wallaalte sitti fakkaataa? Namoonni kaan yeroo hundumaa sidhiisuu? Walitti dhufeenyi kee yeroo hundumaa gad aanaa fi duwwaadhaa? Kanaaf maarree Yesus karaadha! Jireenyis hiika kan birraa akka hin qabnetti alii alii shakkitaa?
Erga duutee booda jiraachuu barbaadda? Akkas taanaan Yesuus karaadha! Karaan maalii? Dhugaan maalii? Jireenyi maali? Yesuus jireenya quubsuudhaaf karaa dha.
Yesuus tiksee fi michuudha kan ati barbaadaa turte. Yesus jireenya-biyya lafaa kana irrattis isa itti aanuttis. Yesuus karaa fayyinaati. Macaafni Qulqulluun hundumti keenya akka cubbuu hojjennetti nutti hima, sababa kanaatiif Waaqayyotti gargar baanee jirra Macaafa Lallabaa ; Roomaa Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya akka qabaannuudhaaf uumamne.
Sababa cubbuu keenyaa, walitti dhufeenya sana irraa gargar baaneera. Amma iyuu illee waanti gadheedhaan, cubbuun keenya Waaqayyo irraa akka garaa gara baanu nutaasiseera baraa hanga bara baraatti , jireenya kanattis isa dhufuttis Roomaa ; Yohaannis Rakkinni kun akkamiin hiika argata? Yesus karaadha! Yesus cubbuu keenya ofii isaaf fudhateera! Inni maaliif isa sana godhee? Sanaan booda beelli keenya hafuuraa deebii argata. Michuu dhugaa gaarii keenyaa fi tiksee keenya ni beekina.
BirmaduuAdmin Jireenya Jiraachuu fi jireenya dhimma baasu jirachuun waa lama. Gatii fi hiikaa kana egaa dhimma baasaa jireenyichaa jenna. Jireenyi keenya jireenya irra darbee dhimma baasuu qaba. Dhimma hawaasa keenyaaf, dhimmaa maatii keenyaaf, akkasumas dhimmaa namoota naannoo keenya jiran maraaf.
Namni dhuunfaatti ofii isaati jireenya dhimma baasu hin jiraanne, isa biraaf darbee wanta dhimma baasu hin qabu.
Gadi gatamee miilla namaatiin didhiitama malee waa tokkollee hin fayyadu. Amanaan soogidda biyya lafaati. Waaqayyo araara isaan nuu keessa hafuura isaan jiraachuu waan fedheef, ijaa hafuura keenyaa waan nuuf baneef jireenyi keenya soogiddumaa kana horate. Garaa hadha kee keessattan bifa sitti godheen akka ati jiraattuuf hafuura koo sitti baafadhe Faarfannaa Lakkobsa Rifeensa mataa kee gubbaa jiru ani nan beeka,utuu ati jecha afaan kee keessaa hin baafatinan waan ati jechuudhaaf jirtu hunduma ani nan beeka.
Maat ,Faar Ani bareecheen miidhegseen si tolche Faar Ati Simbirroota baayyee irra in caalta Maat. Ani umama undumaa irraatti aboo siifan kenne Faar ,UmaCubbuu hojjechuudhaan ulfina ani siif kenne irraa kufte Rome ,Uma. Mucaa dheekkamsa fi diina koo taatee jiraachuu jalqabde Efe ,Rome Ati qophaatti hin haftu kan koo waan taateef gara kee nan dhufa Yoha ,1Qor.
Cubbuun kee hundumtuu siif dhiifameera 1Yohaballeessaan kee hundumtuu dhiiga Yesuus Kiristoosiin Surraa dhiqameera 1 Yoha ,9. Amantiidhaan qajeelummaa argatteettaa Rome Ati amma maatii maatii Waaqayyo keessaa tokko taateetta 1Phex Jireenyi ati amma jiraattu ilma kootti amanuudhaan Galat. Ija kee isa irraa hin buqifatin.
Inni isa amantii kee jalqabee isa fiixaniis baasuuf aboo qabuudha Ibi Kiristoos hafuura isaatiin sikeessa jira, atis isa keessa jirta Yoha ,Qola. Hafuura koo isa si keessa jiruun geggeeffami jiraadhu male Zeka. Akka Waaqayyo si jaallatu in amantaa? Yohaannis Namni Maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti amanu jireenya barabaraa qabaata,garuu kan maqaa tokkicha ilma Waaqayyotti hin amanne ammuma iyyuu isatti faradameera,inni ammuma iyyuu dheekkamsa Waaqayyoo jala jiraata.
Si oui, ce site est pour toi. Menu et widgets Afaan Oromoo Beelofteettaa? Beeluu fooniinii miti, garuu jireenya keessatti waanta caalaaf beeluu qabdaa? Waanti keessa keetii kan ati quuftu hin fakkaanne gadi fageenya qabu jiraa? Bita sitti galee?
Akkuma namni tokko ibisaa dhaamsee ati immoo bakka deebisanii qabsiisamu wallaalte sitti fakkaataa? Namoonni kaan yeroo hundumaa sidhiisuu? Walitti dhufeenyi kee yeroo hundumaa gad aanaa fi duwwaadhaa? Kanaaf maarree Yesus karaadha! Jireenyis hiika kan birraa akka hin qabnetti alii alii shakkitaa?
thoughts on “Yesuus jireenya”
30.07.2021 at 18:15
01.08.2021 at 14:49
Faumi on Yesuus jireenya